महिलाको स्वास्थ्य: गर्भपातबाट पुन: प्राप्ति
स्वास्थ्य, महिलाको स्वास्थ्य
यदि एक महिलामा गर्भपात भएको छ भने, उनको शरीर पछि विभिन्न तरिकामा पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ, र यो गर्भपात को चुनेको तरिका मा निर्भर गर्दछ। साथै यो प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने डाक्टरको अनुभव महत्त्वपूर्ण छ। चिकित्सा अवरोध पछि जीवनी एक सामान्य अवस्था मा छिटो छ, तर सर्जिकल हस्तक्षेप सामान्यतया धेरै गम्भीर पुनर्निर्माण उपाय चाहिन्छ। त्यसोभए यो गर्भपात बाट पुनःप्राप्ति गर्न कति लामो समय लाग्छ? हामी यस प्रश्नको जवाफ दिन प्रयास गर्नेछौं।
गर्भपात सफल भएपछि र बिरुद्ध जटिलता पछि बहाल गर्न यो यौन जीवनलाई3हप्तासम्म छोड्न आवश्यक छ। सर्जरी पछि यौन असामान्य हुन यो धेरै खतरनाक छ, जस्तै विभिन्न जटिलताहरु को एक उच्च सम्भावना, जस्तै गर्भाशय वा रक्तचाप को आँसु जस्तै। यो यौन संभोगको समयमा शरीर मा संक्रमण को लागी हुन्छ।
शारीरिक स्वास्थ्य गर्भपात पछि सामान्यतया2हप्ता पछि पुनर्स्थापित गरिन्छ, र यस अवधिमा खेलहरू अपमानजनक छन्। यो पेट मांसपेशिहरु को आराम मा हुनु आवश्यक छ। यो भार वजन लिने यो पनि निषिद्ध छ। सफलतापूर्वक शारीरिक पुन: प्राप्तिको कारण, जटिलताहरूको जोखिम कम हुन्छ।
संक्रमित वा जीवाणु को शरीर मा राखन को लागी रक्षा को लागि, केहि समय को लागि स्नानघर, पूल या खुले पानी मा स्नान देखि बचना आवश्यक छ।
प्रक्रिया उचित पोषण पछि एक महत्वपूर्ण कारक हो। शरीरको लागि गर्भपात - एक बलियो तनाव, त्यसैले तपाईले यसलाई माइक्रोटेक्टिट र भिटामिन, साथ साथै फाइबर र प्रोटीनहरूसँग संतृप्त गर्नु पर्छ। यसलाई शरीरको तापमान, पल्स, दबाबको समय-समयमा मापन गर्न आवश्यक छ। शरीरको सामान्य अवस्थाबाट कुनै पनि विचलन जटिलताको सुरुवात गर्दछ, त्यसैले तपाईंले सकेसम्म एक चिकित्सकको भ्रमण गर्नुपर्छ।
अक्सर प्रायः गर्भपात पछि शरीरलाई पुनर्स्थापित गर्न एंटीबायोटिक्स लिन आवश्यक छ। यस अवस्थामा, तपाईंलाई अल्कोहल हुँदैन।
मासिक धर्म चक्र पुनर्स्थापित गर्दै
शरीर को लागि गर्भपात एक धेरै गम्भीर तनाव हो, त्यस पछि उनको मासिक धर्म चक्र लगभग सधै तोडिएको छ । साधारणतया, एक जवान र स्वस्थ स्त्रीले गर्भपात पछि मासिक सुधारको साथमा छ। तर अक्सर यो हुन्छ कि चक्र को अवधि लामो छ वा छोटो छ, र परिशुद्धता को प्रकृति परिवर्तन। स्क्यान्ट स्मियर देखा पर्न सक्छ, र यो सर्जरी पछि endometrium को अपूर्ण बहाली द्वारा समझाएको छ।
यदि गर्भनिरोधक पछि पुनरुत्थान पछि वसूली एक लामो समयको लागि स्क्यान उत्तेजना संग छ, यो जाँच गर्न आवश्यक छ। यो रोग अवस्था निम्न कारकहरूद्वारा हुन सक्छ:
पिट्यूटरी, हड्डी र हाइपोथोमस द्वारा हार्मोन उत्पादन मा कार्यात्मक विफलता। यो सामान्यतया चिकित्सा गर्भपात पछि हुन्छ र ठूलो मात्रामा एन्टिप्रोस्टेस्टिनसँग सम्बन्धित छ, र यसैले हार्मोन थेरेपी आवश्यक छ।
Endometrium वा ग्रीक को मकोनिकल क्षति। गर्भाशय गुफा मा endometrium को चोट सानो pelvis मा चिपकने को गठन को नेतृत्व गर्दछ, जो मासिक समयमा को समयमा अस्वीकार गरिन्छ।
साथै, चक्रको पुनरुत्थान पछि प्रचुर मात्रामा सङ्कलन सँगसँगै यदि एक सतर्क हुनुपर्छ। उनीहरूले अन्ततमिति हाइपरप्लासिया वा एडेनमेमीसिसको विकास गरिरहेको छ भनेर संकेत गर्दछ।
Uterus को पुनर्स्थापना
गर्भपात पछि, गर्भाशय सबै भन्दा अधिक हुन्छ, र गर्भावस्था लामो समय मा समाप्त हुन्छ जब तिनीहरु धेरै गम्भीर चोट हुन्छ। विशेष गरी शक्तिशाली श्वासले उपकरणहरूसँग स्क्रैप गर्ने कारण राख्दछ।
गर्भावस्था को समाप्ति पछि, गर्भाशय अनुबंध मा शुरू हुन्छ र यसको सामान्य आकार मानिन्छ। तर त्यस ठाउँमा जहाँ भ्रूण अण्डा संलग्न भएको थियो, त्यहाँ ठूलो घाँटी छ, जसले निको पार्ने समय चाहिन्छ।
यदि सबै केहि जटिलताहरु जान्छ भने, गर्भनिरोधक पछि गर्भाशय को पुनर्स्थापना एक महिना सम्म रह्छ र महिना को शुरुवात संग यो सामान्यतया यसको आयाम हो। तर यदि अनिवार्य परीक्षाको क्रममा2हप्तापछि डाक्टरले देख्नेछन् कि गर्भाशय बढेको छ, नरम वा दर्दनाक हुन्छ र यो सबै अत्यन्त अप्रिय गंधको साथमा रातो रातो छुट्टीको साथ हुन्छ, यसले यसको सूजन मान्न सक्छ।
यो कारण निम्न कारणहरूको लागि हुन्छ:
खराब गरी गर्भपात गरे, जसको परिणामस्वरूप भ्रूण अन्डाको अंश गर्भाशयमा रह्यो;
छोटो संक्रमणको सक्रियता;
चिकित्सा गर्भपात पछि पुन: प्राप्ति
अर्को तरिकामा, गर्भावस्था को यो समाप्ति हार्मोनल भनिन्छ र शुरुवात चरणहरू (6 हप्तासम्म) मा लागू हुन्छन् जुन औषधीको प्रयोगले प्रायः गर्भपातको कारण बनाउँछ । त्यस्ता औषधीहरू विभिन्न फार्माकोलोजिकल समूहहरू हुन् र गर्भाशयको अनुभवी गतिविधिलाई प्रभाव पार्छ र हार्मोन्सको उत्पादन जसले गर्भावस्थाको पाठ्यक्रमलाई समर्थन गर्दछ। यी औषधिहरु को प्रभाव को तहत, गर्भाशय तेजी देखि हटना शुरू हुन्छ, हार्मोन को उत्पादन कम हुन्छ, जिसके परिणामस्वरूप भ्रूण अन्डा मर्छ र विषाक्तता हुन्छ।
हार्मोनल गर्भनिरोधकबाट रिकभरीज बिना रिकभरी पुनःस्थापना गर्न, केहि नियमहरू छन्:
तपाईंले तनावको घटनालाई अनुमति दिन प्रयास गर्नु हुँदैन, सही खाऊ र राम्रोसँग आराम गर्नुहोस्;
गर्भपात पछि पीडा कम गर्न, महिलाहरु लाई औषधि लिन्छन् तर केवल डाक्टर संग सहमत भएपछि, पछि उनि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर गर्न सक्छन्;
एक विशेष आहारले शरीरलाई भिटामिन र सूक्ष्म क्षणमा सोरेट गर्न मदत गर्नेछ;
संक्रमणबाट बच्नको लागि, केहि निश्चित समयको लागि यौन क्रियाकलाप छोड्न आवश्यक छ, बारम्बार गर्भावस्था;
यो मासिक धर्म चक्र र स्रावको स्वभाव को पालन गर्न आवश्यक छ, र यदि2महिना मा यो ठीक छैन, हार्मोन प्रतिस्थापन को आवश्यकता हुनेछ ।
यदि तपाइँ यी सबै सिफारिशहरूको अनुपालन गर्नुहुन्छ भने, तपाईं धेरै गम्भीर जटिलताहरूबाट जोगिन सक्नुहुन्छ।
कस्ता जटिलताहरू हुन सक्छन्?
गर्भपात पछि, नकारात्मक परिणामहरू आशा गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, गर्भाशयमा त्यहाँ भ्रूण अण्डाको भाग हो, त्यसैले चिकित्सकले सफा गर्दछ, जुन शंकु गर्भाशय र यसको गर्दनलाई थप क्षति पुर्याउँछ। यसले रक्तचापको घटनालाई प्रस्ट पार्छ, जुन तत्काल अस्पताल भर्न आवश्यक छ। यसको अतिरिक्त, गर्भाशय गुहा मा भ्रूण को अवशेषहरु को उपस्थिति को संक्रमण को विकास को लागि अनुकूल पर्यावरण पैदा गर्दछ। बिना उपचार को बिना माइक्रोस्ल ट्र्यूम मा, नमकिंगाइटिस, एंड्रोमेट्रिटिस वा पुष्पमेन्ट एसिलेशन हुन्छ।
कुन लक्षणहरू डाक्टर चाहिन्छ?
जब निम्न लक्षणहरू देखा पर्दछ, तपाईलाई संकोच गर्नु हुँदैन, तर तपाईले डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्दछ:
कोटसँग भारी रक्तचाप;
एक pungent गंध संग स्राव;
उच्च तापमान, दबाइहरु संग पनि दबाइ नहीं मिलयो;
गम्भीर पेट दुख्ने;
मतभेद, मूर्खता, चकलेट।
गर्भपात पछि बहाली विभिन्न तरिकाहरु मा आयी छ, तर मुख्य कुरा यो छ कि महिलाले उनको स्वास्थ्यलाई सम्भव हुन सक्छ। प्रक्रिया पछि दुई हप्ता, अलि साना शारीरिक उद्धरण पहिले नै सिफारिस गरिएका छन्।
धेरै महिलाहरूले हेरचाह गर्दा गर्भपात पछि छोराछोरी हुन सक्छन्। यो मासिक धर्म चक्र को बहाली हुन सम्भव छ। यस प्रक्रिया पछि, शरीरले तुरून्त पुनर्निर्माण गर्न, यसको सामान्य लयमा फर्काउन सक्षम छ। नयाँ मनुष्यको लागि तयारी गर्दै, अंडाहरू प्रोजेस्टरोन र एस्ट्रोगेन उत्पादन गर्न सुरु गर्छ, यसले ओविलेशनको उद्भव बढाउँछ।
थप गर्भावस्थाको लागि योजना6महिना भन्दा पहिले हुनुपर्दछ, र एक बर्ष पछि पनि। यो समय शरीर पुनर्स्थापना गर्न पर्याप्त हुनेछ, र जटिलताहरु को संभावना काफी कम भयो।
गर्भनिरोधक प्रयोग गर्नुहोस्
गर्भपात पछि अवांछित गर्भावस्थाबाट बचाउन , यो सही गर्भनिरोधक छान्नु आवश्यक छ। इष्टतम विकल्प ट्याब्लेटको प्रयोग हो, जुन, अन्य चीजहरू बीचमा, हार्मोनल विफलताको प्रभाव हटाउँदछ र अन्त्यकोरण विकारहरूको विरुद्धमा सुरक्षा गर्दछ। गर्भनिरोधक गोलीको लागि धन्यवाद, सूजन को जोखिम नाटकीय रूप देखि कम छ। यसको अतिरिक्त, यी गर्भनिरोधकहरूले निम्न योगदान गर्छन्:
रक्त को मात्रा मा घटाइयो, जो रोगजनक microflora को विकास को एक स्रोत बन सकते हो;
गर्भाशय संकुचनको गतिविधिमा घटाउनुहोस्, ताकि रोगजन्य सूक्ष्मजीवणहरूले गर्भाशय गुफाबाट ट्यूबहरू भित्र घुसाउन सक्दैन;
गर्भाशय मक्खन सिलाई, जुन संक्रमणको अवरोधको रूपमा कार्य गर्दछ।
एक सानो मात्रा मा हार्मोन युक्त ट्याब्लेटहरू सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ, किनकि एस्ट्रोजेनले तयारीमा समावेश गरेको रगत को लागी क्षमतामा वृद्धि गर्न योगदान गर्दछ।
यसैले, यदि गर्भवती गर्भावस्था को समाप्त गर्न को लागि एक महिला को लागी मजबूर भएको थियो , तो उनलाई सम्झना चाहिए कि गर्भपात देखि पुनर्प्राप्ति एक लामो समय लामो हुन सक्छ र विभिन्न जटिलताओं संग। यसकारण, अनावश्यक गर्भावस्थाबाट बच्न, तपाइँ गर्भनिरोधक प्रयोग गर्नु पर्छ।
एचबीका लागि पेन्कििलर: अनुमोदित ड्रगको सूची
महिलाहरुमा हिंसा: उपचार, समीक्षा, कारणहरू, फोटो
पलियोपियन ट्यूबहरूको अमेरिकी सतावट। अध्ययनको लागि संकेत
मेरो टाउकोमा म्यानस्टुमेसन भन्दा पहिले किन चोट लागेको छ: सम्भावित कारणहरू र उपचार
किन प्रत्येक ग्राहकको गर्न व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रयोग गर्ने?
Dzhubga को रिसोर्ट गाउँमा: आकर्षण, मनोरञ्जन र आराम। Dzhubga के हेर्न?
वजन लागि कागति कसरी प्रयोग गर्ने?
रोगजनकों जो जीवाणुहरु छन्? जीवाणु र मान्छे
Capelin घरमा Appetizing sprats: सबै स्वाद को लागि व्यञ्जनहरु
कोस्टस्टोन (वाक्यांश): अभिव्यक्ति को अर्थ
चाहे प्रारम्भिक गर्भावस्था मा अल्ट्रासाउंड गर्न? प्रारम्भिक गर्भावस्था मा अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भावस्था (फोटो)
कार लेक्सस रास 600h: एक अवलोकन, विनिर्देशों र समीक्षा
Masimov करीम: जीवनी, परिवार, पेसा